Orchids kutarisira - nemazano aya orchid yako ichabudirira
Orchids Care - Ndingakurira Sei Orchids Yavo | Plant plant
Ko kukura kweamashizha kunogona kukurudzirwa sei?
Zvikanganiso zvinowanzoonekwa mumaruva orchids
Iro orchids kana Orchidaceae inonzi yakakurumbira zvikuru uye inopararira kumativi enyika.
Orchids iri shure kwemhuri ye daisy, iyo inonzi Asteraceae, yechipiri boka guru pane imwe nzvimbo yemabhedecktsamigen.
Vanoonekwa sekunakidza zvikuru. Nokuda kwechikonzero ichi, orchid ndiyo mambokadzi pakati pemiti kune vazhinji vanodikanwa nevaruva.
Mhuka dzakasiyana-siyana dze orchid yakawanda. Pasi pose pane zvinosvika kune zvisikwa zve 30.000 zvakagamuchirwa. Mutsara unotevera unotsanangura mamwe mazano uye matanho ekutarisira nekubata zvakanaka kwe orchids. Inokurukuriranawo izvo zvikanganiso kana orchid zvinowanzoita.
Chaizvoizvo, orchid iri nyore kwazvo kushandisa muti usingatsvaki.
Zvisinei, pane zvishoma zvingakanganisa zvinogona kuitwa muuschid kutarisirwa. Saka kuti izvi zviitike uye maoriki anonzwa zvakanaka, zvinyorwa zvinotevera zvinopa ruzivo rwekuzviita zvakanaka.
Kukura kwe orchid kunogona kukurudzirwa zvakanakisisa pamwe nekodzero yakanaka yemamiriro ezvinhu. Izvi zvinosanganisira kutengwa kwemuti wemiti inokodzera orchid. Pano, ukuru hwebhodhi hunokosha. Ndapota onai kuti pikiti ye orchid yako ndeyekukura kwakakodzera zvakakodzera muti.
Izvi zvinoreva kuti iyo orchid iyo inofanira kunge isina kukura. Mamiriro acho ezvinhu ndeokuti mbeu yemiti ye orchid inopa kugadzikana. Zvisinei, muhari huru yakawanda chinangwa ichi hachikwanisi kuzadzika. Mumamiriro akaipisisa, orchid haisati yakatsigirwa zvakanaka nemhaka yehari huru. Zvisinei, izvi zvinodiwa kuitira kuti maruva anokwanisa kukura zvakanaka. Muchiitiko ichi, zvimwe nzvimbo hazvirevi kukura, asi zvakasiyana. Zvinoshungurudza muti kana iwe ukatengawo muhombe mukuru.
Kakawanda, iko kukanganisa kunoitwa uye kunoruramiswa nekuti chimiro ichi chiri kukura uye ichi chave chagoverwa pakutanga. Zvisinei, izvi zvichapa muchero wako urongwa hunokosha hwokukura. An orchid iyo isingagadziri muhari yayo haizokura zvakanaka. Nokudaro, tapota svikai kune pethoji duku. Ndizvo chete izvo zvingaita midzi ye orchid ine mukana wekuzvigadzirisa zvakakwana.
Mukuwedzera, zviduku zviduku zvakakodzera mumvura inofanira kudururwa. Panguva ino, inofanira kuonekwa kuti orchids haifariri mvura yakawanda yemvura. Saka zvakakosha pombi duku umo iwe unodyara orchid yako uye yaunogara uchinwa nemvura ine shoma shoma yemvura. Saka iwe unogona kuzviponesa matambudziko angazobatanidzwa nehari huru.
Somuenzaniso, chimwe chezvinetso izvi ndechekuti kana huwandu hwemvura hwakakwirira, orchid haigoni kunyatsopindira mvura. Mvura iyo inomhanyira mupuri. Somugumisiro, iyo midzi midzi haigoni kunyarara nguva dzose. Kana izvi zvisingawanikwi nenguva, mbeu yacho inorwara. Izvi zvinoratidzika muchokwadi chokuti midzi inoora. Ichi chiitiko chakakosha kune orchid. Panguva ino, haakwanisi kuzvipa mishonga yakakosha. Kana izvi zvisingazivikanwi, muti unogona kufa. Izvi zvinofanira kudziviswa pamatambudziko ose. Ndapota onai nguva dzose muve nechokwadi chokuti hamuna mvura muhari.
Miti yacho inodururwa pamusoro-mvura zhinji
Kufanana nedzimwe mimwe michero, orchids inoda mvura kurarama. Zvisinei, nokuti orchids dzine mashizha asingakwanisi kununura mvura yakawanda nokuda kwezvinhu zvavo zvakananga, chiyero chakanaka chinokosha.
Ndine hanya nemashizha orchidi yangu kuti ive maruva here?
Mushure mokunge midzi yadzorerwa zvakakwana, mvura yakasara inofanira kubviswa. Kana zvisina kudaro, muti wacho unotyisidzirwa nerufu. Nokudaro, njodzi yemiti inenge yakasimwa yakakura kudarika mungozi yemiti inomesa. Pamusana pemamiriro ayo, orchid inogona kurarama zvakanaka pasina mvura kwenguva refu. Saka kukanda kwakarurama ndeyei alpha uye omega ye orchid kutarisirwa.
2) The orchid is not a sun - it's too late sun
Kusiyana nezvimwe miti yakawanda, orchid inoda zuva, asi iri mumwero. Orchids iyo yakanyanya kureba muzuva, inofungisisa iyo nekuita nzvimbo dzine rima. Izvi hazvioneki zvakanaka uye simiti inonzwa isinganzwisisiki. Muchiitiko ichi unofanirwa kutarisa nzvimbo itsva, shadier yemuva. Chiedza chakawanda chinobatsira orchid, asi hapana zuva rakananga.
3) Mhepo isina kunaka - kwete pamusoro pemhepo inopisa muchando
Mhepo iri muimba haifaniri kunge yakaoma, nokuti izvi hazvidi maoriki. Anosarudza mweya unodziya uye unonyoro panzvimbo. Kuti ibudise hunyoro, somuenzaniso, muti unogona kusvibiswa nemvura. Zvisinei, izvi zvinongova nguva pfupi pfupi. Imwe inowanzopa kupisa kumiti muchando nekuiisa pamusoro peirairi. Asi mhepo iyi inotonhora inoshatisa orchid, nokuti inoderedza huwandu hunodiwa.
4) Kuchenjerera apo kucheka - midzi yemhepo inokosha inokosha kune orchids
Imwe tsanangudzo yekutarisira inosanganisira midzi inonamatira kunze kwehari. Izvi hazvina kunaka kutarisa. Zvisinei, midzi yepanyika inokosha kune orchid. Icho chiri pakati pegorosi uye naizvozvo inotarisira kupiwa kwekudya. Pane imwechete iyo: kana midzi yakaora kana yakafa iyo inogona kubviswa.
5) Chirongwa chakanaka chema fertilizer
The orchid has a low relative nutrient requirement. Nzvimbo yezvirimwa yemiti yacho inobva munaApril kusvika kuSeptember. Pasi panguva ino muti unofanirwa kuwedzerwa huwandu hwepamwedzi pamwedzi. Mushure mokunge kufungisa kwacho hakuchina kukosha uye zvinofanira kuregererwa.
6) Usashandura kutsetseka zvakanyanya
The orchid loves this habit. Izvi zvinoshandawo kune kukwirira kwemazhizha. Kana kutonhora kuchinjwa mukamuri umo orchid inorarama, haisisiri kunzwa zvakanaka uye inomira maruva. Kuchengetedza izvi, kutarisirwa kunofanira kutorwa kuti firiji yekamuri inenge yakafanana mugore rose.
Coloring page orchids
Kuchengetedza peji kana orchids kuvanhu vakuru